काठमाडौँ – बिर्सने धेरैको बानी हुन्छ । त्यसमाथि पढेको कुरा बिर्सिएर परिक्षामा तनाव बेहोर्ने विद्यार्थीहरु धेरै हुन्छन् । पढेको कुरा केहिछिन मै बिर्सिने समस्या भएका विद्यार्थीहरुलाई धेरै शब्द स्मरण गरेर विश्व किर्तिमान राखेका अर्पण शर्माले १० टिप्स दिएका छन् । हामी पनि पढौं उनका १० टिप्स र लागु गर्ने प्रयास गरौँ: १. विद्यार्थीले अध्ययन गर्दा […]
हरि प्रसाद भुसालका ४ मुख्य भनाइहरु
१, हाँस्न सिक्नुस, बाच्न अाफै सिकिनेछ । २, कुनैपनि व्यक्तिलाइ अावश्यकता भन्दा बढि महत्व नदेउ, अावश्यकता भन्दा बढि महत्व दिईएकाे सम्बन्ध एकदिन टुट्छ टुट्छ । ३, देशमा पत्रकार मात्र सुध्रने हाे भने अाधा सुशासन स्वतह कायम हुन्छ । ४, पैसाकाे लागि र पैसाका कारण जाेडिएका सम्वन्धहरु पैसाले नै टुटाउछ ।
अनलाइन रिटेल कम्पनी अलिबाबाका चेयरम्यान ‘ज्याक मा’ एसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन् । उनले ‘वाण्डा ग्प’का रुवाङ्ग जियानलिनलाई पछि पारे । ब्लूमबर्गको इण्डेक्स अनुसार ज्याकको सम्पत्ति २३ बिलियन डलर पुगेको छ । आउनुहोस , उनका केही यस्ता भनाइबारे जानकारी दिँदैछौं । जसलाई फलो गरेर जो कोही पनि सफलताको शिखरमा पुग्न सक्छ । यहाँ ज्याक […]
असफलताको बारेमा आठ भनाइहरू
१. पटक पटक असफल हुदाँ पनि उत्साह नगुमाउनु नै सफलता हो । – विन्सटन चर्चिल २. असफलता पुनः बुद्धिमत्तापूर्वक कार्यको प्रारम्भ गर्न दिइएको अवसर हो । – हेनरी फोर्ड ३. म असफलतामा विश्वास गर्दिन, यदि कार्यमै तपाईले आनन्द लिनुभयो भने त्यो असफलता होइन । – वप्रा विन्फ्रे ४. संसारका महान् व्यक्तिहरूले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सफलता […]
यी हुन्, सफल जीवन बनाउने सुत्रहरु
एजेन्सी – सफल जीवनको चाहाना सबैले गरेका हुन्छन् । तर त्यो जीवन पाउनको लागि धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । मानव जीवनमा उतारचढाव त आइरहन्छ । त्यो उतारचढावलाई सामाना गर्दै सहि बाटो अंगाल्ने गरेमा असम्भव भन्ने कुरा केहि पनि छैन । सफल जीवन बनाउन हाम्रो दिमाग पनि स्वस्थ हुनुपर्छ । जसले यस्ता उतारचढावलाई सजिलैसँग स्वीकार्छ । […]
अनुभवसँग सम्बन्धित उत्प्रेरक भनाईहरु पढ्नुहाेस
जीवनलाई पछाडी हेरेर वा वितेकाे कुरालाई हेरेर केवल बुझ्न वा सम्झन सकिन्छ तर अगाडी हेरेर जीवन जीउनु पर्छ । १) अनुभव तपाईलाई तब मिल्छ जब तपाई गर्न केही अरु नै खाेजीरहनु भएकाे हुन्छ तर संयाेग मिल्छ अरु नै । २) खराब अनुभव एक यस्ताे विधालय हाे जहा सिर्फ मुर्ख मानिसहरु मात्रै फर्केर गईरहन्छन । ३) […]
दिनेशप्रसाद घिमिरे, उपसचिव, सर्वोच्च अदालत नियमित पढाइ र विविध विषयप्रतिको रुचिका कारण मैले लोकसेवाका १३ वटा लिखित परीक्षामा नाम निकाल्न सकेँ। पढ्दा टिपोट गर्थें। सम्भावित प्रश्नहरू लेखेर पनि अभ्यास गर्ने मेरो बानी थियो। समसामायिक घटनाबारे मिडियाबाट धेरै ‘अपडेटेड’ हुन्थेँ। म २०३५ सालमा खोटाङ, दिक्तेलको निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएँ । हाम्रो परिवार नै सरकारी जागिरे […]
म महान कहिल्यै छैन, जबसम्म तिमी सोच्दैनौ सबै महान व्यक्ति भनेको सानै हुन्छ र सिकारु हुन्छ । नेल्सन मण्डेला दक्षिण अफ्रिकाका प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति हुन् । उनको जन्म १८ जुलाई १९१८ मा भएको थियो । उनको राजनैतिक यात्रा भने सन् १९४८ बाट सुरु भयो । प्रथम अश्वेत राष्ट्रपतिका रुपमा उनी सन् १९९४ देखि १९९९ सम्म […]
सफलताका लागि गान्धीका १० फर्मुला
मोहनदास करमचन्द गान्धी (महात्मा गान्धी)ले अहिंसात्मक आन्दोलनबाट भारतलाई ब्रिटिस राज्यको दबदबाबाट स्वतन्त्र बनाए । जब उनले भारतीय जनतालाई ब्रिटिसको क्रूर शासनबाट स्वतन्त्र बनाए, तब उनको नाम विश्वभरि फैलियो । गान्धीलाई शान्तिको दूतका रूपमा पनि लिइन्छ । त्यसैले आदर्शवादी गान्धीबाट आजका मानिसले पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । यहाँ चर्चा गरिएको छ, उनका १० वाणीको, जुन […]
1) ‘रिस’को उल्टो ‘सरी’ पनि हुन्छ । कहिलेकाही उल्टो बोल्दा नि फाइदा हुन्छ । 2) मेरो एउटा पनि सत्रु छैन, सत्रु देख्यो कि मैले सिध्याइहाल्छु.. … उसलाई साथी बनाएर । 3) शहर र गाउँमा दुई फरक छन । (i). शहरमा घरहरू नजिक नजिक हुन्छन तर मनहरू टाढा टाढा हुन्छन, गाउँमा घरहरू टाढा टाढा हुन्छन तर […]
सफल जीवनका लागि सम्झनैपर्ने १० कुराहरु
1) यदि सपना पूरा भैरहेको छैन भने बाटो बदल्नुस ,सिद्धान्त होइन , किनकी रुखले हमेशा पात बदल्ने गर्छ जरा होइन…. 2) जिवनमा जतिनै दुख परेपनि कहिल्यै नआतिनु किनकी विहान हुनको लागी उषाका किरण संगै शितका थोपा झर्नु पर्छ अनि खुशि हुनको लागी दुई नयनविच ऑशुका थोपा वग्नु पर्छ..!! 3) लापरवाहीसँग जंगलमा फालिएको एक सानो झिल्कोले […]